Alahady 26/07/2015 : Toriteny – Ecar Sainte Anne Anjomakely
« Velomin’Andriamanitra amin’ny mofo avy any Aminy isika »
Amin’izao taona B izao, dia ny Enanjely nosoratan’i Md Marka no vakiana. Fa mandritry ny herinandro vitsivitsy eo, dia tapahina kely izany mba ahafahana manazava mikasika ny “mofon’aina”; Ka ny tantaran’ny fampitomboana ny mofo no anombohana azy.
Raha iverenantsika ny tantara dia nanao fahagagana maro i Jesoa: nanasitrana aretina, sy ny rofy isan-karazany. Noho izay antony izay dia nanaraka an’i Jesoa hatraiza hatraiza ny vahoaka.Rehefa hitan’i Jesoa fa noana ny vahoaka dia hoy izy tamin’ny mpianany: “Omenareo hanina ireo vahoaka ireo.” Ny Apôstôly nefa tsy nieritreritra an’izay fa i Jesoa no nahalala ny fahorian’ireo vahoaka ireo.
Inona ny vahaolana hitan’ireo mpianatra?
Hoy i Filipo: “Na mofo denie roanjato aza tsy ho ampy azy ireo akory.” Ny “denie” iray dia karaman’ny olona iray mandritry ny tontolo andro ; izany hoe: na karaman’olona iray mandritry ny roanjato andro aza dia tsy ampy ho an’ireo vahoaka nanaraka azy ireo.
Ny an’i Andre indray: “Misy zazalahy manana mofo dimy sy hazandrano roa ao, fa hahavita inona moa izany.”
Nahalala ny tokony ataony i Jesoa, saingy nitodika tamin’ny mpianany izy aloha mba anomezana andraikitra azy ireo. Mampitodika an’ireo mpianatra ireo mba hijery ny zava-misy manodidina. Rehefa izay dia niteny i Jesoa nanao hoe: “Asaivo mipetraka ny olona.” Noraisin’i Jesoa ny mofo sy ny hazandrano, rehefa avy nisaotra izy dia nozarainy. Nihinana ny olona ka voky, ary rehefa nangonina dia nahafeno 12 sobika ny sombintsombiny sisa tsy lany (Tsy mahazo manarinary zavatra fahatany fa misy ilavana azy foana ireny. Izany no antony anaovantsika an’ireny fahafoizana ho an’ny sahirana ireny rehefa Noely, Paka, fetim-pirenena … ) Nozaraina tamin’ireo 5000 lahy ny mofo ka nisy ambiny 12 sobika: amin’ny fomba Jody dia tsy mba isaina ny zaza sy ny vehivavy fa ny lehilahy ihany no isaina. Fa i Jesoa no nanomboka nanadratra ny vehivavy, nanome ny toerana tokony hisy ny vehivavy na eo amin’ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly, na eo amin’ny asa.
Ankehitriny dia hitantsika fa efa mihafeno ny Fiangonana na aiza na aiza alehantsika, ary mitady hevitra daholo ny olona hanitatra fiangonana. Inona ny antony? Noana ny vahoaka, mitady izay hahavoky. Noana isika, noana ny Tenin’Andriamanitra, noana ny fahasoavan’Andriamanitra. Mihazakazaka isika hanantona an’Andriamanitra, farafaharatsiny ny Alahady isika tonga mivavaka, mitady an’Andriamanitra. Misaotra an’Andriamanitra fa mbola mahatsapa an’izay hanoanana izay isika, araka ilay voalaza hoe: “Sambatra izay noana sy mangetaheta ny fahamarinan’Andriamanitra”, fa ny olona efa voky, tsy andeha hitady an’Andriamanitra intsony. Ary izay no olana any amin’ireo firenena matanjaka: arakaraky ny mampatanjaka azy no mahatonga azy tsy hanantona an’Andriamanitra intsony satria efa voky ny kibony. Fa ho antsika izay aty amin’ny tany mahantra dia fahasoavana ho antsika izay fahantrana izay.Noana isika, ary io anararaotan’ny mpitondra fivavahana sasany: ianareo izay te hanana asa sy te ahazo vola , tongava aty mivavaka; ahodin’ny olona amin’ny zavatra hafa izay tokony hanantonantsika an’Andriamanitra izay.
Rehefa voky ireo vahoaka dia nitady hisambotra an’i Jesoa, mba hanandratra azy ho mpanjaka satria nihevitra izy ireo hoe : “ity angamba no ilay mpaminany lehibe.” Nihevitra izy ireo fa raha i Jesoa no lasa dia tsy hisy ho noana intsony, rehefa noana dia hampitombo ny mofo indray izy. Izay no tadiavin’ireo vahoaka ireo. Ary ho hitatsika rehefa any amin’ny faran’ity Evanjely ity dia niala tamin’i Jesoa daholo indray ireto vahoaka ireto satria i Jesoa nilaza hoe: “Izaho no mofo velona”, ny an’ny vahoaka anefa ny hanohanan’ny vatana no lazainy.
Misaotra an’Andriamanitra isika fa manana izany hanohanana ara-panahy izany izay manosika antsika hiavavaka isan’andro isan’andro. Mahatsapa isika fa misy banga, misy tsy ampy ao amintsika ao ary eo amin’Andriamanitra ihany no ahafahantsika mameno an’izany. Fa raha tsy manantona an’Andriamanitra isika dia manao zavatra hafa, ka mila matoky an’Andriamanitra isika.
Ary tahaka ny nanirahan’i Jesoa an’ireo Apôstôly koa, dia andraikitsika ny mijery ny olana any anaty fiarahamonina any, manome vahaolana, fa tsy ampy ny mivavaka fotsiny. Ny fampitomboana ny mofo no lazain’ny Evanjely, fa ilay fihetsik’i Jesoa: nahatsapa ny fahorian’ny oloa, nanome andraikitra an’ireo Apôstôly… izay no jerentsika. Arakaraka ny hizarantsika no anomezan’Andriamanitra antsika, koa mahaiza mizara amin’ireo manodidina antsika, mba jereo ireo sahirana manodidina antsika, ireo mahantra tsy mba misy mpiahy. Ny angatahitsika dia ny mba tsy ho kristianina Alahady fotsiny isika fa handray andraikitra, hitondra vahaolana eo amin’ny fiarahamonina misy antsika.